अभिनेत्री आशिकाको यस्तो छ अठोट ! - Everest Dainik - News from Nepal
अभिनेत्री आशिकाको यस्तो छ अठोट !
अभिनेत्री आशिका तामाङलाई चिन्नुहुन्छ ? यदि चिन्नुहुन्न भने नेपाली चलचित्र ‘सुश्री’ हेर्नुहोला । अभिनेता आर्यन सिग्देलसँग रोमान्स गर्ने अभिनेत्री उनी नै हुन् ।
उक्त चलचित्र उनको डेब्यु थियो । १ करोड लगानी लगाएर उनी आफैं हिरोइन बनेकी थिइन् । तर, चलचित्र बक्सअफिसमा डिजास्टर साबित भयो ।
हलिउड अभिनेत्रीद्वय किम कार्दशियन र एन्जेलिना जोलीसँग आफ्नो फिगर दाँज्न रुचाउने उनलाई ‘खसिनी काण्ड’ ले एकाएक चर्चामा ल्याएको थियो । हालै जर्मनीबाट लगभग २ वर्षको बसाईका लागि नेपाल आएकी उनी २ घण्टाको फिल्मले नचिनाएको आफूलाई २ मिनेटको भिडियोले सबैमाझ चिनिएको बताउँछिन् ।
याे पनि पढ्नुस बैंकर बन्ने सपना अधुरै, सुनीलको जिद्दीले निर्देशक बनिन् झरना
अब उनी पुनः फिल्म निर्माण गर्ने सोचमा छिन् ।
चलचित्र ‘सुश्री’ बाट एक करोडभन्दा बढी डुबाएँ । अब डेब्यु फिल्ममा भएको घाटा उठाउने गरी फर्किएको छु । नेपाल बसाईको क्रममा फिल्म निर्माण गरेर र हिट बनाएरै जर्मनी फर्किन्छु’, उनी भन्छिन् । उनले फिल्म बनाउन हतार भने नगर्ने बताइन् ।
याे पनि पढ्नुस छायाँकार दिनेश युरोपमै लुकेपछि.....
आशिका अगाडि भन्छिन्, ‘पहिला फिल्म गर्दा केही थाहा थिएन । अन्धाधुन्ध फिल्म निर्माण र अभिनयमा होमिएँ । अब हतार गर्दिनँ । पहिला सबै बुझ्छु । अग्रजहरुसँग सल्लाह लिन्छु अनि मात्र फिल्म बनाउँछु ।’ फेरि हिरोइन बन्ने हो ? उनी भन्छिन्, ‘अहिले नै यस विषयमा सोचेकी छैनँ।’
हरेक वर्ष ९० प्रतिशतभन्दा बढी चलचित्रका निर्माताले करोडौं डुबाउने गरेको बताउँदै आशिका, आफूले एक करोड डुबाए पनि धेरै सिक्न पाएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘नेपालमा ५–१० प्रतिशत फिल्ममात्र हिट छन् । अब त्यसमा म पनि परेरै छाड्छु ।’ उनलाई अभिनेता आकाश श्रेष्ठसँग भने रोमान्स गर्ने इच्छा रहेछ ।